Koety: 10.000$ Ho Fikojakojana Fiara Fotsiny! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2017 14:06 GMT
(Marihina fa tamin'ny 15 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Handany 10.000 $ ve ianao mba hikojakojana ny fiaranao ho mamiratra? Fantatro fa tsy hanao izany aho, kanefa misarika ny saintsika momba ilay olona iray izay manao izany fotsiny ny bilaogera Libaney Mark, izay mipetraka ao Koety.
Hoy i Mark nanoratra :
Tamin'ny volana Desambra, niresaka momba ny mpisera iray tao amin'ny YouTube antsoina hoe paradise1man aho izay vao nahazo Bugatti Veyron ary naka lahatsary momba izany sy nandefa azy an-tserasera. Raha nijery ny kaontiny aho amin'izao fotoana izao dia manana lahatsary aman-taoniny izy, momba an'i Paul Dalton no farany indrindra tamin'izany, “Ilay mpanadio fiara mahay indrindra eto amin'izao tontolo izao”, izay tonga avy any amin'ny Fanjakana Britanika mihitsy mba hanadio ny fiarany fotsiny.
Ahitana an'i Paul Dalton manadio ny fiara amin'ny 10.000 $ ny lahatsary etsy ambony. Raha izaho izany dia efa leo an'ilay fiara aho afaka iray volana tatỳ aoriana, ary nanomboka nitondra izany ho any amin'ny mpanasa fiara Bayan (ao an-toerana) …
Namaly ny lahatsoratra i Paradiseman hoe:
Tiako ny milaza aminao zavatra iray, tsy fantatrao hoe ohatrinona ny vidin'izany amiko na 10000$ io na 1$ ? ary tsy fantatrao raha namako izy na tsia, na mety ho nanao izany maimaim-poana fa tsy fantatrao, mihevitra aho fa aleo ianareo haminavina ny momba izany, miala tsiny aho raha nilaza zavatra mahatohina ny fihetseham-ponareo, kanefa tiako ianareo rehetra ary Andriamanitra hitahy anareo, mirary soa ary mazotoa.
Manana fanangonana lahatsary ao amin'ny YouTube izay mampiseho ny fanangonany fiara sarobidy sy ny fomba fikarakarana ireo fiara amin'ny fomba manaram-penitra iraisampirenena ny Paradise1man . Ity ny lahatsarin'ilay fikojakojana fiara nolazaina fa 10.000$ (Mariho ary fa efa voafafa ilay sary):